रिमा विश्वकर्मा र बिमलेशको यस्तो सम्बन्ध ! हेर्नुस यो भिडियो – Rastriyapatrika
रिमा विश्वकर्मा र बिमलेशको यस्तो सम्बन्ध ! हेर्नुस यो भिडियो
कुनै बेला झण्डै एकदर्जन म्युजिक भिडियोमा एकसाथ देखिएका थिए कलाकारहरु बिमलेश अधिकारी र रिमा विश्वकर्मा । अहिले बिमलेश अमेरिकामा बस्दै आएका छन् भने रिमा पनि नेपाल आइडल सिजन २ का विजेताहरुको प्रस्तुतीका साथमा अमेरिकामा नै छिन् ।
रिमा अमेरिका आएको मौकामा बिमलेशले रिमाको अन्तरवार्ता लिएको एउटा रमाइलो भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा बिमलेशले निकै रमाइलो पारामा रिमाको अन्तरवार्ता लिएका छन् । भिडियोमा दुबैले विगतको कुरा गरेका छन् ।
मेरिल्याण्डमा छायांकन गरिएको उक्त भिडियो बिमलेशले आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । रिमा र बिमलेशले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक हुनु अगाडि यो अन्तरवार्ता सार्वजनिक भएको हो ।
मेरिल्याण्ड र वासिंटन डिसीमा छायांकन गरिएको नयाँ म्युजिक भिडियो छिट्टै सार्वजनिक हुने जनाइएको छ । प्रशन्न पौडेलको निर्देशन रहेको उक्त भिडियोको गीत रञ्जु सुवेदीले गाएकी छिन् ।